Imiyalo ye-virt ku-Debian - Networking Networking yama-SMBs | Kusuka kuLinux
Imiyalo ye-virt ku-Debian - Networking Networking yama-SMB
Isihloko salokhu okuthunyelwe sisho uchungechunge lwemiyalo yekhonsoli eqala ngo- «amandla- « futhi lokho kungasiza ezimweni ezithile. Sizonikeza kuphela incazelo emfushane ngayinye, kanye nezibonelo ezithile zokusetshenziswa. Siyakuphinda lokho: Asikwazi ukubuyisela amabhukwana ahambisana nomyalo ngamunye. Siphakamisa ngokuqinile hlola lawo makhasi ngokusebenza umuntu amandla-umyalo.
Inhloso enkulu yale ndatshana ukuqhubeka nokukhombisa indawo ebanzi njengamanje eyi-Virtualization kuLinux ngeQemu-KVM Hypervisor. Noma esihlokweni sibhala igama ukusatshalaliswa «Debian«, Izimiso ezijwayelekile ziyasebenza kunoma ikuphi okunye ukusatshalaliswa ngemiyalo ethile yalowo nalowo wabo. Ikakhulukazi lezo ezihlobene nokuseshwa, incazelo nokufakwa kwamaphakeji, phakathi kwabanye.
Ngaphambi kokuqhubeka nokufunda, sincoma ukuvakashelwa i-athikili edlule: I-Qemu-KVM + Umphathi we-Virt ku-Debian - Networking Networking yama-SME.
1 Uyisebenzisa nini imiyalo?
2 Kufakwe ngamakhasimende e-libvirt
3 Kufakiwe withisb
4 umbukeli we-virt
5 Eminye imiyalo ye- "virt-" engafakwa kusuka kumaphakeji ahlukile
6 Kufakiwe nge qemu-utils
7 Izibonelo zokusetshenziswa kweminye yemiyalo
7.5 ukuguqula kahle
8 Ukwakheka kwefayela le-dns.xml
9 Ukulethwa okuzayo
Uyisebenzisa nini imiyalo?
Ezikhathini eziningi silawula kude iseva yokusekela nge-virtualization nge I-Qemu-KVM ifakiwe, futhi ngasizathu simbe asinayo i-graphical interface ye Umphathi Wemishini Ebonakalayo - Umphathi we-Virt:
Icala elijwayelekile, lapho singena kuseva ekude kusuka esiteshini seWindows nge- I-PuTTy, noma enye yeziningi ezinye izindlela akhona ukuxhumana nge-SSH neseva ye-Debian GNU / Linux, futhi eyokugcina ayinakho ukusekelwa okufakiwe kwe- «X«, Noma ukusekelwa kwezithombe.
Simane nje sifuna ukuphatha imishini ebonakalayo kuseva yasendaweni noma eyihlane sisebenzisa imiyalo yekhonsoli.
Kufakwe ngamakhasimende e-libvirt
Ku isihloko esandulele sifaka iphakheji libvirt-umgqomo, futhi njengengxenye yenqubo yafakwa libvirt-amaklayenti. Uma sigijima kukhonsoli:
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo dpkg -L libvirt-amaklayenti | grep / bin
/ usr / bin / virt-host-ukuqinisekisa
/ usr / bin / virt-xml-ukuqinisekisa
/ usr / bin / virt-pki-ukuqinisekisa
virsh: uhlelo lwe-virsh luyisixhumi esibonakalayo somsebenzisi sokuphathwa okuphelele kwezizinda zezivakashi - Izivakashi. Isetshenziselwa ukwenza uhlu, ukudala, ukumisa isikhashana, nokuvala izizinda. Lo myalo kufanele ucelwe ngezimvume ze- izimpande. Inezindlela ezimbili zokusebenzisa: kumodi yomyalo nakwimodi yokusebenzisana. Sizonikezela i-athikili elandelayo ku-virsh.
i-ide-host-iqinisekisa: ithuluzi elivumela ukuqinisekisa ukumiswa kwe-Host - Host, ukuze ikwazi ukuxhasa bonke abashayeli beHypervisor - I-Hypervisor. Ukuthola imiphumela efanele, umyalo kufanele usebenze ngezimvume ze- izimpande.
i-virt-login-Shell: umyalo wokwenza a igobolondo egcizelele i umsebenzisi ojwayelekile esitsheni I-LXC, ogama lakhe lifana nomsebenzisi oyisebenzisayo. Uma isitsha singasebenzi, umyalo i-virt-login-Shell ngizozama ukukuqala. Lo myalo awunakubuzwa ngezimvume zomsebenzisi izimpande. Ifayela lokumisa elicace bha lolu hlelo /etc/libvirt/virt-login-shell.conf.
i-ide-xml-iqinisekisa: Qinisekisa amafayela weXML kusuka ku- libvirt ubaqhathanisa nohlelo - i-schema isebenza. Sithola uhlu lwamagama we-schema avumelekile uma sisebenzisa indoda i-virt-xml-validate.
amandla-pki-aqinisekisa: kusetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi ngabe amafayela we-PKI we libvirt Zilungiselelwe kahle, zombili ohlangothini lweseva ephephile nakwiklayenti elizosebenzisa umthetho olandelwayo wokubethela we-TLS ukufinyelela kude iseva. Ukwenziwa kwayo kuzodingeka uma sinike amandla ukuphatha okukude nge-TLS ne-SSL. Isahluko 22.2 sombhalo Umhlahlandlela Wokusatshalaliswa Kokusebenza kanye Nokuphatha, Kunikezelwe kulesi sixazululo. Siphakamisa ukuthi amanethiwekhi wethu webhizinisi asebenzisa i ukuphathwa okukude nge-SSH, indlela elula nephephe kunazo zonke ye-Business LAN, esizonikezela ngayo i-athikili elandelayo.
Esihlokweni esandulele, sifake nephakheji umphathi we-virt. Njengengxenye yaleyo nqubo, iphakethe lafakwa amandla. Uma sifuna ukwazi ukuthi imiphi imiyalo yokugcina equkethe, sisebenzisa:
byzz @ sysadmin: ~ $ sudo dpkg -L i -instinst | grep / bin
/ usr / bin / virt-isithombe
ukuguqula kahle- umyalo oguqula izincazelo zemishini ebonakalayo zibe amafomethi VMX y I-Ovf kufomethi ye-libvirt yomdabu XML. Ifomethi ye-VMX isetshenziswa kakhulu yifomethi ye- VMware, ngenkathi i-OVF «Vula ifomethi ye-Virtualization»Ingasetshenziswa yinoma yimuphi I-Hypervisor isekele.
isithombe esihle- Kwakha umshini obonakalayo kusuka kufayela elichaza isithombe ngefomethi ye-XML. Leli thuluzi elithile lizosuswa kuzinguqulo ezizayo ze- amandla, kanjalo Asiphakamisi ukusetshenziswa kwayo.
amandla-xml: Ivumela ukuhlelwa kwamafayela omdabu weXML asetshenziswa libvirt, usebenzisa izinketho zomugqa womyalo.
i-virt-installIthuluzi lomugqa womyalo ovumela ukudala imishini emisha ebonakalayo kuma-Hypervisors afana ne-KVM, i-Xen noma i-Linux Containers esebenzisa umtapo wezincwadi wokuphathwa kwe-hypervisor "Libvirt". Leli thuluzi lisekela ukufakwa kokuqhafaza uma sisebenzisa, isibonelo, i- VNC I-Virtual Network Computing, noma Izinongo. Iphinde isekele ngokuphelele imodi ye-console noma yombhalo. Ngokusebenzisa kwayo singakha umshini obonakalayo one-hard drive eyodwa noma eziningi, ikhadi elilodwa noma amaningi wenethiwekhi, amadivayisi womsindo, amadivayisi we-USB noma i-PCI, njalonjalo. Imidiya yokufaka ingaba yendawo, ekude, eshicilelwe kusetshenziswa umthetho olandelwayo we-UNIX NFS Network File System, i-HTTP, i-FTP. njll.
amandla-clone- Ithuluzi lomugqa womyalo wokuhlanganisa imishini ekhona ekhona usebenzisa umtapo wezincwadi wokuphathwa kwe-hypervisor "Libvirt". Ngokuyisisekelo kopisha isithombe somshini obonakalayo bese udala isihambeli esisha - Guest ngokucushwa okufanayo kwezingxenyekazi zekhompyutha. Izinto zehadiwe ezidinga ukuhlukaniswa, ngokwesibonelo ikheli lehadiwe lekhadi lenethiwekhi, lizobuyekezwa ukugwema ukushayisana noma umsindo phakathi kokudala nokusha Guest.
Leli thuluzi lifakwa futhi lapho wenza ifayela le- umphathi we-virt. umbukeli we-virt yiphakheji ehlukile.
umbukeli we-virt: isivumela ukuthi sibonise ikhonsoli yokuqhafaza, nge-VNC noma i-SPICE, yomshini othile obonakalayo, noma ngabe utholakala endaweni noma ukude. Singabhekisa ku Guest esifuna ukuyiveza ngegama layo, i-ID, noma i-UUID. Uma umshini obonakalayo ungasebenzi, isibukeli se-virt sizolinda ukuthi siqale.
Eminye imiyalo ye- "virt-" engafakwa kusuka kumaphakeji ahlukile
okuhle-okuhle- Iqoqo lamathuluzi ahlobene nokwenza kahle. Kufaka i-plugin ye «Munin«, Nombhalo wokuguqula imishini ebonakalayo eyenziwe nge-VMware Workstation noma i-VMware Server, kufomethi esetshenziswe kuQemu-KVM.
phezulu-phezulu: Kukhombisa izibalo zezizinda ezibunjiwe. Uhlobo lwe top o htop imishini ebonakalayo
Kufakiwe nge qemu-utils
Yize igama lala mathuluzi lingaqali ubuhle-Impela kuzofanele sisebenzise ezinye zazo ngesikhathi esithile, ikakhulukazi lezo ezihlobene nezithombe zamadiski emishini ebonakalayo.
Singabancenga ngemuva kokufaka ifayela le- Ipulatifomu yokwenza ngekhono iQemu-Kvm, njengoba kukhonjisiwe esihlokweni esandulele. Uma sifuna ukwazi ukuthi imiphi imiyalo iphakethe elisele esinalo qemu-utils, sidinga nje ukugijima:
Uma esikhundleni sokubandlulula nge / bin besizokwenzela yona / sbin, sizothola omunye umphumela esiwushiya ucabangele wona.
qemu-img: isivumela ukuthi sakhe, futhi siguqule futhi / noma siguqule izithombe zama-disc ezingasebenzi noma ezingasebenzi Ngaphandle komugqa.
Siphakamisa sebenzisa umyalo indoda qemu-img. Sizogcizelela kuphela ukuthi AKUFANELE sisebenzise lo myalo ku shintsha noma yisiphi isithombe esisetshenziswa yinoma yimuphi umshini obonakalayo noma enye inqubo, ngoba singasonakalisa isithombe. Futhi akufanele sithinte imininingwane yesithombe esisekuhlelweni lokuguqulwa, njengoba singathola ukungahambelani esimweni saso.
Izibonelo zokusetshenziswa kweminye yemiyalo
buzz @ sysadmin: ~ $ ide-host-validate
I-QEMU: Ihlola i-hardware virtualization: I-PASS QEMU: Ihlola i-device / dev / kvm: I-PASS QEMU: Ihlolela i-device / dev / vhost-net: ISEXWAYISO (Layisha imodyuli ye-'vhost_net 'ukwenza ngcono ukusebenza kwe-virtio networking) I-QEMU: Ihlola i-QEMU device / dev / net / tun: PASS LXC: Ukuhlola iLinux> = 2.6.26: PASS
buzz @ sysadmin: ~ $ Sudo-host-validate
[Sudo] password for buzz: QEMU: Checking for hardware virtualization: PASS QEMU: Checking for device / dev / kvm: PASS QEMU: Checking for device / dev / vhost-net: PASS QEMU: Ukuhlola idivayisi / dev / net / tun : PASS LXC: Ukuhlola iLinux> = 2.6.26: PASS
buzz @ sysadmin: ~ $ qemu-img hlola /tera/vmware/omicron/omicron.vmdk
Awekho amaphutha atholakele esithombeni.
ifomethi yefayela: usayizi obonakalayo we-vmdk: 20G (21474836480 bytes) usayizi wediski: 3.6G cluster_size: 65536 Fometha imininingwane ethile: cid: 1473577509 parent cid: 4294967295 create type: monolithicSparse extents: : virtual size: 21474836480 filename: / tera / vmware / omicron / omicron.vmdk usayizi weqoqo: 65536 ifomethi:
ifomethi yefayela: usayizi we-virtual eluhlaza: 20G (21474836480 bytes) usayizi wediski: 3.4G
ifomethi yefayela: usayizi obonakalayo we-qcow2: 10G (10737418240 bytes) usayizi wediski: 4.5G cluster_size: 65536 Fometha imininingwane ethile: compat: 1.1 ukubala okuvilaphayo: amanga
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo qemu-img guqula -p /tera/vms/omicron.raw -O qcow2 /tera/vms/omicron.qcow2
ifomethi yefayela: usayizi obonakalayo we-qcow2: 20G (21474836480 bytes) usayizi wediski: 3.5G cluster_size: 65536 Fometha imininingwane ethile: compat: 1.1 ukubala okuvilaphayo: amanga
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo qemu-img yakha -f qcow2 /tera/vms/hyp2.qcow2 20G
Ukufometha '/tera/vms/hyp2.qcow2', fmt = qcow2 size = 21474836480 encryption = off cluster_size = 65536 lazy_refcounts = off
ifomethi yefayela: usayizi obonakalayo we-qcow2: 20G (21474836480 bytes) usayizi wediski: 196K cluster_size: 65536 Fometha imininingwane ethile: compat: 1.1 ukubala okuvilaphayo: amanga
Okokuqala, sakha i-albhamu entsha:
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo qemu-img yakha -f qcow2 /tera/vms/dns2.qcow2 10G
Ngemuva kwalokho siyijoyina kusizinda esivele sikhona se- "dns":
--- XML ​​Yangempela +++ I-XML Eshintshiwe @@ -128,5 +128,10 @@  + + + + +
Chaza 'i-dns' nge-XML eshintshiwe? (y / n): y
Isizinda 'dns' sichazwe ngempumelelo.
Ekupheleni kwendatshana sinikeza ukwakheka okuphelele kwefayela elisanda kuguqulwa /etc/libvirt/qemu/dns.xml.
Masiguqule umshini obonakalayo owenziwe kusetshenziswa i- Indawo yokusebenza yeVMware maqondana nefomethi libvirt, kodwa hhayi ngaphambi kokucacisa ukuthi ifomethi yediski eguqulwe kanzima iyi- qho2, kanye nokuthi isithombe esisha somshini wangempela senziwe endaweni yokugcina esemqoka / tera / vms. Sifuna nokuthi okukhiphayo komyalo kucace ngangokunokwenzeka, ngakho-ke sisebenzisa inketho -d.
Buzz @ sysadmin: ~ $ I-sudo virt-convert -d / tera / vmware / miweb / --disk-format qcow2 --destination / tera / vms
Ngemuva kwalokho, isibukeli se-virt sixhuma ngokuzenzakalela kusihambeli esisanda kuguqulwa, futhi siyabona yonke inqubo yaso yokuqalisa.
Ake sihlanganise umshini obonakalayo «dns":
Buzz @ sysadmin: ~ $ i-virt-clone --connect qemu: /// system -o dns --auto-clone
Ukunikezela 'dns-clone.qcow2' | I-10 GB 00: 20 Ukunikezela 'dns2-clone.qcow2' | 10 GB 00:01
I-clone 'dns-clone' yenziwe ngempumelelo.
Sihlola ukusebenzisa umyalo virsh, okuyisibonakaliso sendatshana elandelayo:
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo virsh uhlu
Isimo se-Id Name ----------------------------------------------- -----
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo virsh uhlu - konke
Isimo segama lomazisi --------------------------------------------------- ----- - i-dns ivaliwe - i-dns-clone ivaliwe - i-miweb ivalekile
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo virsh qala i-dns-clone
I-Dns-clone yesizinda iqalile
buzz @ sysadmin: ~ $ ide-viewer --connect qemu: /// system dns-clone
Sifuna ukudala umshini obizwa nge- «WordPress»Ukusingatha indawo ye- I-Intranet Yebhizinisi. Ngeke ishicilelwe kwi-Intanethi. Ukuthi inama-megabyte ayi-1024 we-RAM, i-hard disk yama-gigabytes angama-80 okukhula okunamandla, okususelwa kuDebian Jessie, futhi ixhunywe kunethiwekhi «ezenzakalelayo".
Ukwenza izimpilo zethu zibe lula, siqala ngokudala isithombe sediski sisebenzisa qemu-img:
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo qemu-img yakha -f qcow2 /tera/vms/wordpress.qcow2 80G
Ukufometha '/tera/vms/wordpress.qcow2', fmt = qcow2 size = 85899345920 encryption = off cluster_size = 65536 lazy_refcounts = off
Okulandelayo, sakha umshini bese siqala inqubo yokufaka:
buzz @ sysadmin: ~ $ Isudo-install -connect qemu: /// system --virt-type = kvm \_
- igama le-wordpress -ram 1024 -vcpus = 1
--os-type linux --network network = okuzenzakalelayo \_
buzz @ sysadmin: ~ $ virt-top --connect qemu: /// uhlelo
i-virt-top 15:39:21 - x86_64 2 / 2CPU 1600MHz 3863MB 2 izizinda, 2 iyasebenza, 2 iyasebenza, 0 ilele, 0 imisiwe isikhashana, 0 ayisebenzi D: 0 O: 0 X: 0 CPU: 0.7% Mem: 768 MB ( 768 MB ngezivakashi) ID S RDRQ WRRQ RXBY TXBY% CPU% MEM ISIKHATHI IGAMA 22 R 0 0 104 0 0.3 6.0 0: 11.49 dns 21 R 0 0 104 0 0.3 13.0 0: 13.42 miweb
Ukwakheka kwefayela le-dns.xml
Ekuqaleni kungabonakala kunzima ukuqonda isakhiwo sefayela lencazelo lomshini obonakalayo noma Guest, njengoba kuqondwa umphathi weQemu-KVM kanye nemitapo yolwazi efana nayo libvirt. Ifayela likufomethi ejwayelekile.xml. Yakhiwe ngamabhulokhi encazelo, aqukethwe ngaphakathi kwebhulokhi enkulu «domain".
Ngaphakathi kwalelo bhulokhi sizothola i- Izincazelo zawo wonke umshini obonakalayo:
uhlobo lohlelo lokusebenza nokwakhiwa kwalo. idivayisi ye ebhuthini.
Izici ezisekelayo njenge-ACPI "Automatic Control Power Interface", i-APM "Automatic Power Management", ne-PAE.
Izinhlobo ze-CPU nezimpawu zazo
ukusethwa kwewashi: noma ngabe i-UTC "United Time Cordinate" noma cha.
impendulo kumicimbi efana nokucisha, ukuqala kabusha, noma ukuphahlazeka kwesistimu
uma u-PM «Power Management» enike amandla imicimbi «ukumisa ukubhala kwimemori» no «ukumisa ukubhala ku-hard disk»
uhlobo lwe-emulator yamadivayisi ahlukile noma Amadivayisi we-KVM
yawo wonke amadrayivu anzima: umshayeli, uhlobo lwediski, indlela yefayela lesithombe, idivayisi eqondisiwe, uhlobo lwebhasi, islot «slot»I-Pci exhunywe kuyo, njll., Kuye nge-disk ebonakalayo: IDE, SATA, SCSI, USB noma i-Virtio.
amadivayisi we-optical njenge-CDR
inombolo nohlobo lwezixhumi ze-USB
pci yediski ye-IDE
isixhumi se-serial sokuxhumana
isixhumi esifanayo samaphrinta
amakhadi enethiwekhi anekheli elihlukile le-MAC, uhlobo lwekhadi lenethiwekhi, lapho i-pci slot ixhumeke khona, nokuthi lizoxhumeka kunethiwekhi engakanani
ama-pty series consoles
amadivayisi wokufaka njengephedi «tablet", Ikhibhodi yegundane"igundane", njll.
ikhadi levidiyo ne-RAM, uhlobo, imodeli, islot, ibhasi, njll.
nenye i-etcetera ende
Ngamafuphi, iLa Mar Océana yezincazelo namadivayisi adingekayo futhi asekelwa yi-Qsim-KVM hypervisor kanye nemitapo yolwazi ehlobene nayo, ukuze ibe nomshini osebenza ngokugcwele ngokungathi ngumshini wangempela.
Buzz @ sysadmin: ~ $ sudo ikati /etc/libvirt/qemu/dns.xml
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE.  IZINGUQUKO KULO KUNGENZEKA UKUTHI ZIBHALWE KANYE NOKULAHLEKA.  Izinguquko kulokhu kumiswa kwe-xml kufanele zenziwe kusetshenziswa: virsh edit dns noma olunye uhlelo lokusebenza kusetshenziswa i-libvirt API.
Ukuphathwa okukude kwama-hypervisors nemishini yabo ebonakalayo besebenzisa i-SSH
Khumbula ukuthi lokhu kuzoba uchungechunge lwezihloko ngu Amanethiwekhi wekhompyutha ama-SME. Sizobe sikulindile!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Imiyalo ye-virt ku-Debian - Networking Networking yama-SMB
Ungibuze impendulo futhi nakhu kuhamba ... 🙂
Uchungechunge luthakazelisa kakhulu, luphelele impela. Ngifunda okuningi ngayo, yize ngingakahloli "ekukhiqizeni".
Okwamanje ngiqedela iphrojekthi engimatasa kakhulu, kepha nakanjani ngizosebenzisa lolu chungechunge njengesethenjwa. Siyabonga ngomzamo omkhulu.
Ngiyabonga uDiego ngempendulo. Okungenani ngithola ukuthi lokho okushicilelwe kuyasiza kuwe. Futhi uqinisile emzameni omkhulu esiwenza eDesdeLinux ukuletha izindatshana ezisezingeni eliphezulu ngolimi lweSpanishi kuwe. Siyazi ukuthi lezi zinhlobo zokuthunyelwe azikho ngobuningi yingakho sizibhala.
I-athikili ebanzi nefundisayo i-amigo Fico, eqoqa kokuthunyelwe imiyalo ye-virt- * esetshenziswe ku-KVM. Kunzima kakhulu ukuthola izinto ezinjengalezi ngolimi lweSpanishi. Ngicabanga ukuthi umyalo we-virt-yini ubungekho. Ngaphandle kwalokho kuhle kakhulu
Siyabonga ngokuphawula, mngani Zodiac. Kuyiqiniso ukuthi umyalo we-virt-what wawungekho. Ngikushiye ngamehlo ngoba izincomo ekusetshenzisweni kwayo ngokusho kwebhukwana lazo zangishiya nginambitheka kabi. Ekugcineni engikuqondileyo ukuthi abayincomi ukusetshenziswa kwayo
Umngane we-Zodiac weqiniso impela. Njengoba uDiego esho ekuphawuleni kwakhe, kungumzamo omkhulu esiwenza eDesdeLinux ukuletha izindatshana ezisezingeni ngeSpanishi. Ngaphandle kwekhophi ye-cd yakudala futhi unamathisele okugcwele eWWW Village. Ukuthi basiza ukuqeqesha abaphathi bohlelo. Labo abalandele lolu chungechunge bazobona ukuthi sihlose ukumboza ngendlela ebanzi, futhi ngendlela enengqondo, isixazululo senethiwekhi yamabhizinisi amancane noma aphakathi nendawo. Ngiyabonga futhi nonke ngemibono yenu.
Kade ngenza okuthile ngama-smartphones e-android, futhi bengingazange ngibe nethuba lokufunda i-athikili enhle kangaka, kulokhu ngifuna ukusho okuthile. Hamba uthambe. Ukuqonda okuhle ...
I-Crespo88, i-athikili ingaba yinde kancane, kepha angiyena umngani wokusika isihloko esithile esinjengalesi kokuthunyelwe okuningana, uma ngabe yilokho okushoyo. Ubunzima bokuqukethwe, angikubeki, kungudaba lokuzibona uqobo. 😉
Bengingabhekisi kuyo, i-athikili enhle kakhulu njengokujwayelekile. Ngisho ukuthi udlala izingoma ezinhle kakhulu, okusho ukuthi, ngosizo olusizo kakhulu. I- "Give it soft" isho ukuthi uyabaleka. Hehehe, umfowethu owanga.
Ngiyabonga mfowethu ngokuphawula
Okuthunyelwe okuhle kakhulu ... I-didactic, iphelele futhi imane iphelele.
Manje, kulabo abakhetha ukusebenzisa lolu hlobo lwe-virtualization, kungcono ukusebenzisa i-oVirt (http://www.ovirt.org/), iphrojekthi eyakhelwe i-Red Hat Virtualization ne-Open Source. Ngale ndlela, kungenzeka ukufinyelela kuzinketho ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngendlela elula, okuyinkimbinkimbi kakhulu ku-console :).
Ngiyabonga kakhulu, Petercheco ngokuphawula kwakho. Esihlokweni esandulele esithi "Virtualization in Debian: Introduction", esigabeni esizinikezele ku-Open Virtualization Alliance, ngibala i-oVirt njengenye yesoftware ephromothwe yi-OVA. Ngicabanga ukuthi i-oVirt yenzelwe ukusetshenziswa okukhulu. Ngakolunye uhlangothi, ucela indawo yokusebenza enikezelwe kuye ngama-4 gig we-RAM njengenani lememori elinconywayo. Umngani wami nozakwethu u-Eduardo Noel "enoel.corebsd@gmail.com" ufake amaseva amaningi wokwenza izinto ngokusezingeni le-CentOS 7, futhi uwaphatha kahle nge-oVirt.
UDenis Cantillo kusho
i-athikili enhle kakhulu umlingani wami, esinye isibonelo sekhwalithi onayo
Phendula uDenis Cantillo
Ngiyabonga, mngani Denis, ngokuphawula kwakho nokudumisa okungifanele kimi. Senza lokho esingakwenza.
Yize ngilinde ukuvivinywa kwemiyalo ye-virt ku-lab yami yasekhaya, angikwazi ukuzibamba kodwa ngibona ukuthi i-athikili imane nje inkulu, iyasebenza kakhulu futhi ilusizo kakhulu ngoba igxile esigungwini okuyiyona engiyithandayo kakhulu kuphrofayili yami sysadmin.
Konke okuhle okuhlobene nokuphathwa kwasendaweni noma okukude kwama-VM ngaphandle kokusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza se- «Virt-Manager».
Nakulokhu futhi, mngane wami uFico, uzikhulisa ngokwabelana ngokuzidela ngolwazi lwakho lomhlaba weLinux.
Ama-SLD asebenzayo we-Wong nami siqhubeka nokutadisha uchungechunge lweVirt Qemu-KVM ngokuzikhandla.
Umngani Wong: Amazwana afana nelakho yiwona angiphoqayo ukuthi ngiqhubeke nokubhala ngama-SME Networks. Abaningi bangazibuza ukuthi kungani ngigxila kakhulu eQemu-KVM, futhi impendulo ikundatshana yami https://blog.desdelinux.net/virtualizacion-debian-introduccion-redes-computadoras-las-pymes/#Open_Virtualization_Alliance_OVA. Okuncane ngaye OVirt, engicabanga ukuthi ifanele izimo ezinkulu kune-SME Network, ngibhekane nezinye izinhlelo ezithuthukiswa yi I-OVA. Lokho kulula
Kungani usesha ngaphandle kwezinqolobane zohlelo lokusatshalaliswa ngakunye engikugibelayo, uma engikudinga ukukuqhakambisa ezingeni lebhizinisi kukhona?
Ngiyabonga ngobuqotho ngemibono yakho, mngani Wong!